Nahazo fanendrena Golden Globe maromaro ny sarimihetsika Steve Jobs | Avy amin'ny mac aho
Ny sarimihetsika farany momba ny fiainan'i Steve Jobs dia nandalo tsy nisy fanaintainana na voninahitra tamin'ny alàlan'ny sinema amerikana sy teatra. Fotoana fohy taorian'ny premiere, noterena ny orinasa mpamokatra hampihena ny efitrano fisehoany nanomboka tamin'ny 2200 ka hatramin'ny 300 mahery no niparitaka nanerana ny firenena.
Ny faran'ny herinandro roa talohan'ny filohan'ny sarimihetsika dia nanapa-kevitra ny hamoaka azy io any amin'ny teatra any Los Angeles sy New York, ny mpamokatrafanamainana ny fanamarihana sy fanangonana tsara mifanaraka amin'ny andrasana, fa raha vao nidona tamin'ny fomba ofisialy ireo takelaka fanaovana bileta manerana ny firenena, dia nahagaga rehefa hita ny zava-misy marina an'ity sarimihetsika ity.
Mandritra ny faran'ny herinandro voalohany, lNahitana ny laharana fahafito tamin'ny sarimihetsika ny sarimihetsika, ary nahazo $ 7,5 tapitrisa. Avy eo, nidina ambany ny famoriam-bahoaka sy ny besinimaro ary tsy nisy freins, hatramin'ny farany nesorina tamin'ny ankamaroan'ny teatra teto amin'ny firenena. Ny tsikera izay avy tany Apple dia tsy tsara mihitsy ary mety hisy fiantraikany amin'ny hevitr'ireo mpampiasa Apple izany.
Ny fialana raha toa ka mifanaraka amin'ny zava-misy ny zavatra hitantsika tamin'ilay sarimihetsika na i Aaron Sorkin dia nanitatra ny lafiny sasany tamin'ny endrika Jobs. Na eo aza ny fanangonana ambany, vao nahazo fanendrena telo Golden Globe ilay sarimihetsika hatolotra ny 10 Janoary.
Isan'ireo voatendry hitantsika ny mahery fo Michael Fassbender tahaka an'i Steve Jobs miaraka amin'i Kate Winslet. Fa ilay mpanoratra ny sarimihetsika Aaron Sorkin ihany koa dia nahazo fanendrena ho an'ny sarimihetsika tsara indrindra. Nilaza i Danny Boyle andro vitsivitsy lasa izay fa te hiditra amin'ny hazakazaka hiditra amin'ny fanendrena ho an'ny Oscar Oscars manaraka izy, ary amin'izao fotoana izao dia tendrena ho Golden Globes no dingana voalohany hahatratrarana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Steve Jobs Movie Nahazo fanolorana anarana Golden Globe marobe